त्यसोभए, तपाइँ अन्ततः तपाईंको महत्वपूर्ण अन्यसँग लामो समयदेखि अवकाश अवकाश लिन जाँदै हुनुहुन्छ। तर जब एक जोडीले सँगसँगै हिट गर्ने निर्णय गर्ने बेलामा शराब र गुलाब सधैं यो छैन। तपाईंको जोडीको अनुभव र तपाईंको सम्बन्धको स्वास्थ्यको सम्बन्धमा एक जोडे छुट्टी एक उत्तम अनुभव हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, अवकाशहरूले पनि सम्बन्ध समस्याको सामना गर्न सक्छ। यहाँ तपाईंले दिशानिर्देश दिइरहनुभएको छ तपाईंको अवकाशलाई तपाईंको महत्त्वपूर्ण अन्य सम्झनाको साथ कसरी बनाउने।
यो यात्रा कार्यक्रम मात्र एक गाइड हो सम्झनुहोस्
योजनामा ​​थप यात्रा गर्न अनावश्यक दबाव थप्न सक्छ। यदि तपाईले मन पराउनुभयो भने यात्रा कार्यक्रममा डच विचार गर्नुहोस् तपाईलाई खुसी भन्दा बढी चिन्तित हुनुहुन्छ। के यो ट्रेन ढिलाइ वा खराब मौसम हो कि होइन, कसरी टोलीको रूपमा समायोजन गर्न सिक्नुहोस्। तपाईंको समय सँगसँगै रमाइलो गर्न सम्झनुहोस्। एक सप्ताहांत खर्च एक साथ एक राम्रो परीक्षण हुन सक्छ कि यदि तपाईं दुवै को राम्रो यात्रा साथी हो भने। तपाईं आफ्नो शहर नजिकको काठमा लामो लिङ्क लिन सक्नुहुन्छ वा तपाईंको नजिकका अन्य शहरहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंलाई कसरी देखाउँछ र तपाईंको साथी कसरी नयाँ वरपरमा व्यवस्थापन गर्नेछ।
2। सधैं म्युचुअल चासोको स्थानहरू छनौट गर्नुहोस्
तपाईं इतिहास बफ हुनुहुन्छ र उहाँ सबै दिन बढ्न चाहनुहुन्छ? कहिलेकाँही योजना बनाउने क्रममा यो निर्णयमा आउन कठिन छ। व्यक्तिको रूपमा, हामी सबैसँग हाम्रो राय छ र कहिलेकाँही NO कुनै स्वीकार गर्न कठिन छ। संसार एक ठूलो स्थान हो र एक देश छनौट गर्न छनौट गर्न गाह्रो हुन सक्छ, सधैँ निर्णय गर्न के तपाईं आफ्नो छुट्टै समयमा के गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईले भ्रमण गर्न चाहने ठाउँहरूको सूची बनाउनुहोस्, तपाइँको सूचीलाई सूचीबद्ध गर्न र तपाईंको तुलना गर्न चाहानुहुन्छ कि तुलना गर्नुहोस् तपाईंको तुलना गर्नुहोस्। जस्तो कि सरल।
3। घरमा तपाईंको दोषी खेलहरू छोड्नुहोस्!
तिमीलाई थाहा छ। उहाँ यो जान्नुहुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ! एकपटक असहमति उठाउँदा, यो राम्रो छुट्टीको अन्त्य हो तापनि तपाईं महँगो विदेशी स्थानमा भएका फूलहरू र पर्दा रोशनीहरूसँग तपाईं वरपर वरपरमा हुनुहुन्छ। बाहिर निस्किनु भनेको सही हो, गलत, वा तपाइँले दुई जनालाई कसरी पहिलो स्थानमा पुग्यो भने अप्रासंगिक र समयको बर्बाद हुन्छ। सबै कुराले समस्याको समाधान खोजिरहेको छ - जो केवल एक साथ आउँदैछ र औंलाहरू लगाउँदैन।
4। पहिले नै आफ्नो बजेट निर्णय गर्नुहोस्
निर्णय तपाईं कसरी कुलमा जाँदै हुनुहुन्छ। के तपाईं बजेट विभाजित गर्न को लागी जाँदै हुनुहुन्छ वा कसैलाई अझ बढी खर्च गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? के तपाईंसँग ठीक छ? यी प्रश्नहरू छन् जुन तपाई आफैलाई सोध्नु आवश्यक छ र तपाईंको महत्वपूर्ण अन्य, यात्रा भन्दा अघि र यो संगठित तरिकामा गर्नु पर्छ। शायद तपाईं मध्ये प्रत्येक को लागि आय मा फर्क यति ठूलो छ कि तपाईं मध्ये एक को सम्पूर्ण छुट्टी को लागि तिर्न चाहन्छ। यदि त्यो मामला हो भने अर्कोलाई उसले त्यो ठीक छ भने भन्नुपर्दछ। कुनै पनि अवस्थामा, आफ्नो यात्राको लागि दैनिक बजेट सेट गर्नुहोस् ताकि तपाईं मध्ये कुनै पनि भन्दा बढी खर्च गर्न सक्नुहुन्न।
5। ओभरप्याक नगर्नुहोस्!
हामी मध्ये धेरै भन्दा धेरै प्याक गर्छौं हामी वास्तवमा चाहिन्छ र तपाइँको यात्रामा एक ठूलो बम्मर बन्नेछ। तपाईं पूर्णतया यात्राको मज्जा लिन सक्नुहुन्न भने तपाईंको ब्याक अतिरिक्त सामान लिईरहेछ। र पनि सबै भन्दा खराब, तपाईंले यति धेरै प्याक गर्नुभएको छ कि तपाईं आफ्नो ब्याक्रीक गर्न सक्नुहुन्न र यसलाई तपाईंको बियर दिन सक्नुहुनेछ। अब उहाँले आफ्नो ब्याक्रीर र तपाईंको ब्याकप्याक लिनु भएको छ उहाँले सोध्नु भएको थिएन! जब तपाइँ प्याकिङ गर्दै हुनुहुन्छ केवल कुराहरू मात्र आवश्यक छ जुन तपाईले जानुहुन्छ र तपाईंले गन्तव्यमा किन्न सक्नुहुन्न। केहि चीज नगर्नुहोस् कि तपाई वास्तव मा एक दिन को लागि आफ्नो पीठ मा नहीं ले सकते हो। यो कुनै पनि हात र पछाडि चोट लागेन।
6। तयार रहनुहोस् तपाईंको साझेदारको केहि अपरिचित लक्षणहरू हेर्न
तपाईं 24 घण्टा बिताउन सक्नुहुनेछ तपाईंको पार्टनरसँग र तपाईले उनीहरूको मनपर्ने र नापसंदको एक अन्तरदृष्टि दिनुहुनेछ। धेरै समय बिताउने बित्तिकै एक अर्कालाई अझ राम्रो थाहा पाउने अवसर सिर्जना गर्नेछ। जब तपाईं उहाँसँग हुनुहुन्छ जब तपाई आफ्नो वास्तविक प्रकृति पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ, र त्यो धेरै डरावना हुन सक्छ। उनले सम्भवतः केहि बानीहरू वा व्यवहारहरू जुन तपाईंले थाहा पाउनुभएन भने, र तपाइँ सबैसँग सम्भवत: जब तपाई 24 /7भेट्टाउन पाउनुहुनेछ। यो पनि तपाईं मा लागू हुन्छ। यदि तपाईं आफ्नो ठुलो गुमाउनु हुन्छ भने त्यहाँ त्यहाँ हुनेछ, जसले भयानक अनुभवको नेतृत्व गर्न सक्छ। तथापि, एकअर्काको बारेमा सिक्न तपाईंलाई अझ नजिक बनाउन सक्छ, र तपाईं पनि तिनका आचरणहरु लाई धेरै प्रिय साथी पाउन सक्नुहुन्छ।
7। एक अर्काको हेरचाह गर्नुहोस्
यदि तिमी मान्छे तर्क गर्दछन् भने, यदि उसले लामो खुट्टाको पछि लागी खुट्टाको मुर्छ भने, केटी, त्यो एक रक्षक हो! तपाईंले एकअर्काको हेरचाह गर्नु आवश्यक छ। तपाईं केहि संग व्यस्त हुनुहुन्छ जब उहाँले पिज्जाको अन्तिम टुक्रा बचत गर्नुहुँदा तपाईंलाई मनपर्दैन? धेरै प्रेम र स्नेह संग हेरविचार फर्काउनुहोस्। एकअर्कालाई एकअर्काको हेरचाह गर्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, एक जिज्ञासा र स्वतन्त्र महिला हुनु प्रयास नगर्नुहोस् यदि तपाई वास्तवमा आफ्नै मा केहि गर्न सक्नुहुन्न भने। उसलाई सहयोग पुर्याउन दिनुहोस् यदि तपाई सोच्नुहुन्छ भने तपाईले गर्नु पर्छ।